लाखौ‌ रुपैयामा विक्रि हुन्छ मेलामा सँस्थाको नाम
हिजो आज जताततै मेला महोत्सवको रौनक छाएको छ । देशका विभिन्न ठाउहरुमा महोत्सव लागिरहेका छन् । प्राय: सवै महोत्सवमा केहि न केहि नारा तय गरिएकै हुन्छ । महोत्सवको नाम लिदा कृषि, पर्यटन, ब्यापार, कला संस्कृतिको प्रवर्द्धन जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो समय मेला महोत्सवमा उच्छृङ्खल गतिविधि समेत बढ्दै गएको पाईन्छ । गज्जवको कु रात के छ भने मेलाको ब्यवस्थापन गर्ने र नाफा घाटा बेहोर्ने पनि अर्कै तर आयोजक भने स्थानिय स्तरबाटै रहेका हुन्छन् । अझ भनौ मेला महोत्सव ठेक्कामा लाग्ने गर्दछ ।
ठेकेदारले केहि लाख रुपैंया आयोजकलाई दिन्छन् र पाएको केहि लाखमा आयोजकले कसैको ब्यापारका लागि आफ्नो संस्थाको नाम बेचिदिन्छन् । स्थानिय स्तरमा भने आफुहरुको संस्था नै आयोजक भएको भ्रम छरीरहेका हुन्छन् । स्थानिय स्तरमा लाग्ने मेला महोत्सवमा न त स्थानिय ब्यापारीले रोजेका स्टलहरुनै उपलब्ध हुन्छन् न त स्थानिय उत्पादनले ठाउ पाउंछन् । ठेकेदारले आफु अनुकलका ब्यापारीहरुलाई पहिलेनै स्टल उपलब्ध गराउछन् बांकी बचेखुचेका स्टल आयोजकका तर्फ बाट स्थानियलाई उपलब्ध गराईन्छ ।
बर्षौ देखि बजारमा ब्यापार गर्दै आईरहेका ब्यापारीले महोत्सवमा ठाँउ नै पाउदैनन् तर महोत्सवका नाममा बाहिरबाट आउने ब्यापारीहरुले लाखौको ब्यापार गरेर जान्छन् त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानिय बजारमा पर्ने देखिन्छ । हामीले सांच्चिकै स्थानिय स्तरमा ब्यापारको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने मेला महोत्सव ठेक्कामा दिने परिपाटि तोड्नै पर्छ । अरु बेला अनुगमनको ढेङ्ग्रो ठोक्नेहरु पनि महोत्सवका स्टलमा कस्ता सामाग्री विक्रिमा राखिएका हुन्छन् ? गुणस्तर कस्तो छ ? कति मुल्यमा बेचेका छन् ? कतै उपभोक्ता ठगिएका त छैनन् ? कत्तिपनि चासो दिएको पाईदैन । लाखौ उपभोक्ताहरुको चहल पहल हुने ठाउमा अनुगमन हुन आवश्यक हुन्छ की हुंदैन ? के सांच्चै बर्षौ देखि लाग्दै आईरहेका मेला महोत्सबले ब्यबसाय, स्थानिय उत्पादन, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गरेका छन् कि छैनन् यसको समिक्षा हुनु आवश्यक हो कि होइन ? यस्तै यस्तै थुप्रै प्रश्नको उत्तर दिने निकाय कुन होला ? स्थानिय स्तरमा कला संस्कृतिको प्रवर्द्धनको चर्को नारा लगाएर महोत्सव आयोजना गर्ने आयोजकलाई स्थानिय स्तरका प्रतिभाले मञ्च पाउनका लागि लाखौ पटक अनुरोध गर्नुपर्छ । विन्ति चढाउनुपर्छ मुस्किलले मञ्च पाईहाले पनि दर्शकको उपस्थिति नहुन्जेल मात्र जव दर्शक आउन सुरु गर्छन् त्यसपछि राष्ट्रिय भनिएका कलाकारहरुले समय लिन्छन् आयोजकले स्थानिय प्रतिभालाई धपाउन सुरु गर्दछन् । के स्थानिय प्रतिभा भिड जम्मा गर्ने साधन मात्र हुन् ? बरिष्ठ भनिएका कलाकारहरुका लागि दर्शक जम्मा गर्ने ठेक्का स्थानिय प्रतिभाको हो ? कसरी भयो स्थानिय कला संस्कृतिको प्रवर्द्धन? आयोजक प्रति सानो जिज्ञासा !
महोत्सवमा कृषि भन्ने नाम जोडिदा महोत्सवका स्टल भित्र कति कृषि जन्य उत्पादनका स्टल देख्न सकीन्छ ? स्थानिय कृषकले आफ्नो उत्पादन स्टल सम्म पुराएर बेच्न पाउंछकी पाउदैन ? अझ भनौ कृषकहरुले मेला महोत्सवलाई आफ्नै महोत्सव महसुस गरेका हुन्छन की हुंदैनन् होला ? एउटा टमाटरको झाल एक गांज साग एउटा लौका एउिटा फर्सी मा स्टिकर लगाएर टाँस्दैमा महोत्सवले कृषिलाई प्रवर्द्धन गरेको भन्न मिल्दैन की जस्तो मेरो बुझाई हो । पर्यटन पनि संगसंगै जोडिदा मेला महोत्सवको माध्यमबाट हामीले अहिले सम्म कति पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न सकेका छौं त सोच्नुपर्ने समय आएको छ । मेला स्थलमा आउनु, मन परेका सामान किन्नु र कलाकार संगै रमाउनुलाई पर्यटन मान्ने हो भने मैले बुझेको पर्यटनको परिभाषा पनि गलत हुन सक्छ ।
मेला महोत्सव हुनका लागि बाल उद्ययन, ठुला ठुला पिङ, म्याजीक शो अनिवार्य शर्त बनिसकेका छन् । हामी बाल उद्यान घुम्ने गर्दछौँ, पैसा तिरी तिरी बालबालिकालाई रमाईलो गराउछौं । हामी पनि पिङ तथा झुलाहरुमा पैसा खर्च गरेर झुलिरहेका हुन्छौ सांच्चै भन्ने हो भने महोत्सवमा सवैभन्दा बढि ब्यापार पनि त्यसैको भएको हुन्छ । स्थानिय स्तरमा आयोजना भएका महोत्सव तथा मेलामा करोडौको ब्यापार बाल उद्यान र झुला तथा पिङहरुले गरेका हुन्छन् । हामीलाई रमाईलो गराउने ति साधन भारतबाट ल्याईने गरिन्छ । हामी जानेर नजानेर करोडौ रकम मेला महोत्सवका नाममा भारततिर पठाईरहेका हुन्छौ । अनी जोडिन्छ मेला महोत्सवको नाममा अर्को शब्द समृद्धि । भएको पुंजी बाहिर पठाएर कस्तो समृद्धिको परिकल्पना गरेका हुन्छौ ।
लाखौ रुपैयां लिएर आयोजक भन्दै संस्थाको नाम बेच्नेहरुका लागि देशको पुंजी बाहिर पठाउने अधिकार कसले दिन्छ ? यस तर्फ कसैले सोच्नु पर्ला कि नपर्ला । मेलामा अर्को रमाईलो पक्ष हो खुल्ले आम जुवा । आयोजक पक्ष यो मान्न तयार हुदैनन् । भाषा फरक होला तर पछिल्लो समय मेला महोत्सवमा रमाईलोका नाममा हाउजी विङ्गो तम्वोला खेलाउने प्रचलन बढ्दै गैरहेको छ । विङ्गो पनि एक प्रकारको जुवा नै हो । प्रशासनमा पहुंच पुग्नेहरुले सेटिङ्ग मिलाएका हुन्छन् । प्रशासनले आंखा चिम्लिएर नदेखेझै गरेकै हुन्छन् । यो कुनै एक ठाउमा मात्र नभएर अधिकांश ठाउमा लाग्ने मेला महोत्सवको कुरा हो । मेला महोत्सवको मिति तय भैसकेपछि नाम मात्रका आयोजकहरुलाई स्थानिय संचार माध्यमहरुमा अन्तरवार्ता जोड्न र सुचना प्रचार प्रसार गर्न भ्याई नभ्याई हुन्छ ।
उनीहरुले दिने हरेक अन्तरवार्तामा स्थानिय क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, ब्यापार ब्याबसायको प्रवर्द्धन र औधोगिक क्षेत्रको विकास गर्ने , पर्यटकिय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राएर आर्थिक बृद्धि गर्ने कुराले सबैभन्दा बढि प्राथमिकता पाउने गर्दछन् । अपसोश हामी मेला महोत्सवको नाममा स्थानिय स्तरमा भएको पुंजीलाई धकेलेर बाहिर पठाउने काम गरिरहेका हुन्छौं । जव सम्म आयोजक आफैले मेलाको ब्यबस्थापन गर्न सक्दैन, जवसम्म मेला महोत्सवमा स्थानिय स्तरका उत्पादनहरुका स्टल, कृषिका स्टल, स्थानिय ब्याबसायीहरुका ब्यापारिक स्टल र मञ्चमा स्थानिय प्रतिभाहरु उभिएको देख्न पाउदैनौ तव सम्म जतीसुकै मिठो नारा घन्काएर आयोजना गरिएका मेला महोत्सव समृद्धिको पक्षमा हुनै सक्दैनन् ।